ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျားပစ္စည်းထိန်းရေး အလေးပေးပါ – MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျားပစ္စည်းထိန်းရေး အလေးပေးပါ
(မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၆
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နေပြည်တော်သင်္ကြန်ဆိုပြီ ခရိုနီရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ပွဲမှာ လူရွှင်တော်ဆိုတဲ့ သူတွေက စင်ပေါ်ကနေ မိန်းမနှိမ်ရေး၊ မိန်းမ ဖိရေးကို ဟာသအသွင်ယူ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်နေကြတယ်။
ခေတ်တွေပြောင်းပြီး ပြောကြပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း အမျိုသားရေးဆိုရင် အမျိုးသမီးပစ္စည်းဖုံးရေးကို ရှေ့တန်းကတင်ကြတယ်။
ရိုးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားရေးသမားများရဲ့ စိတ်အခံနဲ့ လူအများရဲ့ အသိမဲ့မှုမှာ မိန်းမ ဘယ်လိုဝတ်၊ ဘာဝတ်၊ ဘယ်သူနဲ့ သွားလာ၊ ဘယ်သူနဲ့ အိပ်၊ ဘာ သောက်ကို ထိန်းကွပ် ချုပ်ကိုင်ခြင်းက နိုင်ငံတော်အရေး၊ အမျိုးသားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေး ဖြစ်နေတယ်။
အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ ဘာသာဗေဒအရကို လူပါးဝနေတဲ့ အတိုင်းပဲ တကယ့်ကို ကျားကြီးဝါဒီများရဲ့ တင်စီးမှု လူပါးဝမှုပါပဲ။ ကျားများရဲ့ လူ့အကျင့်ပျက်မှု၊ လူမပီသမှု၊ အဝတ်အစားကို ထောက်ပြ လိင်အမြတ်ထုတ်မှု၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှု တွေကို တဖက်သတ် မျက်ကွက်ပြုပြီး မိန်းမ အဝတ်အစားကိုပဲ အမြဲရှေ့တန်းတင် အကာအကွယ်ယူ အမျိုးသားရေးလုပ်နေကြတာပါ။
ဒီလိုနောက်ခံကနေ မွေးဖွားပေးခဲ့တာက ကျားများ အကြမ်းဖက်မှုကို အာပတ်လွတ် ဖော့ တရားမျှတမှု ယူနေကြခြင်းပါပဲ။ လူမြင်ကွင်းမှာ အမျိုးသမီးငယ်ကို ရက်ရက်စက်စက် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း သေမလောက် လုပ်ခဲ့တာကို မိန်းမက သစ္စာမှမရှိတာကိုး ပြောထွက်တဲ့ လူအများ ရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ တုန်လှုပ်စရာ အခြေအနေပါ။
အနာဂတ် လူငယ် ယောက်ျားလေးတွေကို မ အဝတ်အစား ဘယ်လိုဝတ်ဖို့ ဝင်ခြယ်လှယ်စေဖို့ထက် မိန်းမ တယောက်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မအမှု မပြုမိစေဖို့၊ လူ လူချင်း လေးစားတတ်စေဖို့ကိုပဲ သင်ပေးကြဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ဂီတ၊ စာပေအနုပစ္စည်းသက်ရောက်မှုအား Soft Power များကလည်း ဒီသဘောကို ဇောင်ပေးရပါမယ်။
ကျန်ာတို့ အများကြီး လုပ်ရပါဦးမယ်။
အခုတော့ မိန်းမနှိမ်ရေးကို ဟာသအဖြစ် ပြက်ရယ်ပြုဝံ့ကြတဲ့ လူတွေကို ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ ငေးကြည့်ရုံ၊ တွေးကြည့်ရုံ၊ စာတွေရေးဖို့ ကြိုးစားရုံပဲ တတ်နိုင်တယ်။
အချုပ် စကားတခွန်း ပါးရရင်တော့ ကျနော်နဲ့ လိင်တူ ကျားများ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ နိုင်ငံကြီးသားစိတ် မြင့်ချင်၊ ကျင့်ချင်၊ မွေးချတယ်ဆိုရင်ဖြင့် အမျိုးသမီးပစ္စည်းဖုံးရေးထက် အမျိုးသား ပစ္စည်းထိန်းရေး၊ နှုတ်၊ ရုပ်၊ စိတ် အကြမ်းမဖက်ရေးကိုသာ အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းပါပဲ။
Don’t teach women how to dress — teach men to behave!
ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၆
← ကာတွန်း မိုးသွင် – သင်္ကြန်ရေ
ကာတွန်း သီဟ(စခန်းသစ်) – ဟိုးရှေ့မှာ မဏ္ဍပ် →
နန်းကျ ကိစ္စ ပြန်လည် ရှင်းလင်းချက်
January 30, 2014 January 30, 2014 Aung Htet
January 10, 2017 Aung Htet
ကိုသန်းလွင် – ရူးဆိုးတစ္ဆေ
2 thoughts on “ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျားပစ္စည်းထိန်းရေး အလေးပေးပါ”
လူမြင်ကွင်းမှာ အမျိုးသမီးငယ်ကို ရက်ရက်စက်စက် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း သေမလောက် လုပ်ခဲ့တာကို မိန်းမက သစ္စာမှမရှိတာကိုး ပြောထွက်တဲ့ လူအများ ရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ တုန်လှုပ်စရာ အခြေအနေပါ။
ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကို ပြောတာလဲ မသိဘူး။ တော်ဝင်စင်တာ က ကောင်မလေး ကို ကတ်ကြေးနဲ့ ထိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လား။ အဲဒီ အဖြစ်အပျက် ဆိုရင်တော့ အဲလို ပြောထွက်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား လို့ မေးခွန်း ထုတ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အထောက်အထား နဲ့ အဲလို ပြောထွက်တဲ့ လူအများ ရှိတယ် လို့ ရေးရတာလဲ။ ကိုယ်တွေ့မိတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်က အရေးအသား အချို့ဖြစ်စေ၊ ကြားမိကြုံမိ တာဖြစ်စေ ကို မူတည်ပြီး ‘လူအများ’ လို့ ရေးတာ မှန်မယ် မထင်ပါ။ ရေးထားသလောက် ဆိုးရွားမယ် မထင်ပါ။ ပြောထွက်တဲ့ လူအချို့ ဆိုရင်တောင် များလှပါပြီ။ ကိုယ်ကြားရ ကြုံရတဲ့ ကွက်ကွက်ကလေးကို ကြည့်ပြီး ကောက်ချက်ချတာ သဘောမတူပါ။
Very good article. Yes there salong, long way to go. It s the way our society is and sometimes girls are dumb because they don’t have enough wisdom or education.